युवती नल्याएको विवादमा सुरक्षा गार्डको हत्या ! « Lokpath
युवती नल्याएको विवादमा सुरक्षा गार्डको हत्या !
प्रहरीले विराटनगरमा लामो समयदेखि ठेला चलाउने काम गर्दै आएका सहनीलाई आइतबार बिहान विराटनगर-१५ बाट पक्राउ गरेको हो। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीका अनुसार हत्यापछि फरार रहेका सहनीको घटनामा संलग्नता पुष्टि भएपछि पक्राउ परेका हुन्। उनका अनुसार भट्राई र सहनीबीचको चिनजान पुरानै हो। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छापिएकाे छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,भाद्र,११,सोमवार ०१:०३